Isiko ukubhalwa likhula ngokushesha. Lokhu kufakazelwa ezidayiswa eziningi, abantu Tattoos on ezingxenyeni ezihlukahlukene zomzimba. elikhulu nosaziwayo - abathandi zangaphansi imidwebo. Ngoba umuntu tattoo - intela fashion, kodwa othile - indlela yokukhuluma (iyafana izingubo noma kwekhanda). Kukhona futhi labo abasebenzise njengezipho izintelezi, iziphandla kanye talismans, ngoba ihlale inawe. Scorpio - the ezingaqondakali kakhulu futhi engaqondakali uhlobo tattoo. Lisho ukuthini scorpion ngoba yezizwe ezihlukahlukene, nezizwana nabantu?
Lokhu eyisihlobo spider sesibe isikhundla ezimbili njalo. Ezinye izizwe nababusi bakhe ohlonishwayo, abanye esatshwe efana isifo. Emazweni European kuba ngokwesiko emelela ophansi futhi singathandeki izimfanelo zomuntu: yokuziphindiselela, ethule cwaka, isifiso sokulimaza. Scorpio njengesifanekiselo kabanzi ikakhulukazi e-Afrika nase-Asia. Ngokwesibonelo, kubantu baseGibithe nabakwezinye Tibet bafaka iziphandla, izintelezi kanye ngomfanekiso wakhe. Ayekubheka ube ngumsizi wabaningi, ehlakaniphile, futhi izindela tie scorpion nge wokuzidela nokubuyisana.
Tattoos: ngani scorpion amasosha
Eshiya amaqhawe Scorpion kwaba uhlobo usanta waboshwa kuvezwa phezu amabhodi kanye izindwani ukuze bazivikele empini ekulweni nesitha. izizwe zase-Afrika ohlonishwayo le scorpion njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo, ayeveza ukukwazi ukunikeza ukuphila kumuntu ezinhle. Kodwa ngesikhathi esifanayo babemesaba, ngoba nezimfanelo kuye, njengoba ukuziphindiselela futhi ebulalayo. EJapane, isibonelo, scorpion kubonisa ukuhlakanipha ukwahlulela cool. Lihambisana imibala, it Limele uthando nokunokwethenjelwa somshado. Ngo -American Indian scorpion kwakubhekwa njengesibusiso Umhlahlandlela ezinye emhlabeni, wabuye labetibambile enkantolo, futhi enquma isiphetho umphefumulo.
Yini tattoo "Scorpio"
Noma yimuphi tattoo njalo kusho ukuthi utshala izimali ukwesekwa yayo. Izithombe ezifanyo ezihlobene uchungechunge lwezinkanyezi, njengoba umthetho, ukukhonza injongo ukwazisa abanye mayelana kwakho ngemvume abavikela, kuhlanganise nalezo emzimbeni. Kusho ukuthini scorpion kubantu abazalwa asesandleni sakhe? Ziyabhalwa ngomfanekiso wakhe kumele baqinisekise ukungaziwa izimfanelo ezinjalo esivela kubo njengoba amandla, singesabi, ukuphikelela, willfulness, uzibuthe ngokobulili. By the way, umlando we Scorpion njengoba uphawu Zodiac, ngokusho legend, kuyinto okulandelayo: ke Udosi ukuthi wasebenzisa u-Arthemisi, washaywa Orion. UZeyusi kwalokho immortalized scorpion e izibhebhe wasezulwini.
Tattoo "Scorpio" ehlombe lakhe
Ngomqondo onabile, ukuze kuboniswe kuphi emzimbeni, okwenzeka. Ngenxa yobukhulu encane scorpion, futhi ungakwazi ukubhala ku iqakala yakhe, futhi esihlakaleni futhi isisu, ngemuva kwendlebe. Kodwa kukhona tattoo ekhethekile. Lisho ukuthini scorpion ku ibhodi lemisindo sakhe sokhohlo, isibonelo? Ngokuvamile, lolu hlobo lomuntu ilebula wavakashela e ezidonsela Caucasian. Futhi kuze isithombe nge ithiphu ephakanyiswe kubonisa ukuthi umuntu kwakuhilela ubutha, futhi kwehlisa - akukho.